မီးပြတိုက်: What is Life? ( ဘဝဆိုတာ = ?? )
What is Life? ( ဘဝဆိုတာ = ?? )
ဘဝ = စတင်ခြင်း
Life is choosing
ဘဝ = ရွေးချယ်မှု
ဘဝဆို = ကြည်နူးခြင်း
ဘဝ = ပျော်ရွှင်ခြင်း
ဘဝ = အချစ်
ဘဝ = ညီညွတ်ခြင်း
ဘဝ = စောင့်လျှောက်ခြင်း
ဘဝ = ယုံကြည်မှု
ဘဝ = လွတ်လပ်မှု
ဘဝ = ဖန်တီးမှု
ဘဝ = စိတ်ကူးယဉ် ပျော်ရွှင်မှု
ဘဝ = အနုပညာ
ဘဝ = အိပ်မက်
Life is fairy tale
ဘဝ = ဒဏ္ဍာရီ
ဘဝ = တိုက်ပွဲ
Life is stage
ဘဝ = ဇတ်ခုံ
ဘဝ = ဒုက္ခ
Life is storm
ဘဝ = မုန်တိုင်း
ဘဝ = သံဇဉ်
ဘဝ = ကျောင်း
ဘဝ = အလုပ်
ဘဝ = ကံ
ဘဝ = အသိ၊ အလိမ္မာ
ဘဝ = သာယာကြည်နူးမှု
ဘဝ = အပိုင်းအခြားတစ်ခု
Life is match
ဘဝ = ကစားပွဲ
ဘဝ = ခန်းနားထည်ဝါမှု
ဘဝ = သဘာဝတရား
ဘဝ = အလှတရား
ဘဝ = တာဝန်ဝတ္တရား
Life is elegance
ဘဝ = ဟန်ဆောင်မှု
ဘဝ = အခွင့်အလမ်း
ဘဝ = နားမလည်နိုင်သောအရာ
ဘဝ = ဘဝ
ဘဝ = သုည
ကိုဇော် says 14 November 2010 at 00:56
မြတ်မွန် says 14 November 2010 at 13:34
kathy says 23 November 2010 at 17:19
Choose No 30 and No 34 !
summar says 1 December 2010 at 19:05
အရမ်းအရမ်းကို ကောင်းတယ်ဗျ ကျမကြိုက်သွားပြီ
ဒါပေမယ့် ဆူးရဲ့ဘ၀မှာ ပျော်ရွင်ခြင်းဆိုတဲ့ဟာက တခါမှမခံရသေးသလို ခံစားရတယ် ဆူးဘ၀ကို အိပ်မက်(dream)ပဲရှိသေးတယ် ...ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
htet lin says 13 December 2010 at 03:28
I think , "life is suffering" said by Buddha.
အဖြူရောင်နတ်သမီး says 30 January 2011 at 10:48
“ဘဝ” ဆိုတာ မွေးဖွားခြင်းအချိန်မှ သေဆုံးခြင်းအချိန်ထိ ဖြတ်သန်းတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းသင်ခန်းကြီးတခုပါ....
saytanar says 23 February 2011 at 17:44
ဘဝက ကံ ဆို့တဲ့အဖွဲ့မှာ
၃၀၊ ၁၁၊ ၂၀၁၀
၂၀၁၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၇) ရက်နေ့